ရွှေတိုက်စိုး ဘာလုပ်နေလဲ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ရွှေတိုက်စိုး ဘာလုပ်နေလဲ…
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on Nov 14, 2012 in Arts & Humanities | 57 comments
အင်း တတ်သည့်ပညာမနေသာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ…. ကျွန်တော် အုပ်ထိန်းသူ အစ်မ တစ်ယောက်က တောင်ကြီးမှာ မီးပုံးပန်းခြံလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို. ပညာကုန် ထုတ်ပြီး လုပ်ထည့်လိုက်ပီ……… ရွာသူား တွေအတွက်လဲ မြင်ရအောင် ကြွားးးးးးအဲအဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
မီးထွန်းလိုက်တော့ ဒီလိုလေးဖစ်တွားရော ဟဲဟဲ
ဒါကတော့ တက်သစ်စ မော်ဒယ်မင်းသား တစ်ယောက်နဲ. အရုပ်ပေါ့ အလှချင်းပြိုင်နေလိုက်ကျဒါ ခိခိ
ဒါလေးက ဘဲလေးနှစ်ကောင်ပါ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထားရင် အသဲပုံလေး ပေါ်မှာပါ……………………….. ဒီလိုလေး လုပ်တာ……….
ဒါလေးက တော့ ယုန်မိသားစုလေးပါ ယုန်ဖေဖေ ယုန်မေမေနဲ. ယုန်သားလေးတွေပါ…………..
ဒီ စက်ရုပ်ကတော့ အားအရဆုံးပါပဲ………… ၉ပေရှိပါတယ်… လက်၊ခြေထောက်၊ ခေါင်း၊ ကိုယ်လုံးဖြုတ်လို.ရပါတယ်…
ကဲ အားပေးကြပါအုံး အရပ်ကတို.ရေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
၀ါး၊ မီးတိတ်ခွေ၊ ပလပ်စတစ်ကပ်တဲ့ TV ကော်၊ ဆီးဆေး၊ မိုးကာစ ရောင်စုံ ပါ………………..
ပါပါးကြောင်ဝတုတ်၊ မားမားတို့နဲ့ မိသားစုပုံလေးတွေ့ပြီးမကြာသေးဘူး ဘယ်ပျောက်သွားဒါလဲ….
နင်မရှိတော့ ကြောင်ဝတုတ်ဆိုတာ ၀မ်းနဲပြီး ပျော်နေလိုက်တာလေ မြင်မကောင်းဘူး
ပါးပါးနဲ.မားမားက သူဟာသူတောင် စားမလောက်လို. တားတားရေးက မီးပုံးချိုးပီး လုပ်ကျွေးနေရဒါပါအေ…………. ခိခိခိ
သိပါဘူးအေ။ ခေါင်းစဉ်ကြည့်လိုက်တော့ မီးပုံဆိုလို့ မီးပုံပွဲလားလို့ အပြေးလာလိုက်တာ။
မီးပုံးပြန်ကိုးအေ့။ ဒီလက်မှုပညာတော့ ကြိုက်သဟဲ့။
နာ့ ဖို့ လေယာဉ်ပျံလေးချိုးပေးပါ့လား။ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ဈေးကြီးလွန်းလို့။
ညေးရဲ့ စက်ရုပ်ကို ဂုတ်ခွစီးချင်လို့အာကို့ ကို လက်ချောင်ပေးပါလား
အစ်ကို.အတွက် ဘီအီး ပုလင်း မီးပုံးလုပ်ပေးမယ်လေ……
ညညဆို မီးလေးထွန်း ဘီအီးပုလင်းလေးဖက်ဖက်အိပ်ပေါ့…….. ခစ်ခစ်ခစ်
မိတိုက်က တော်လိုက်တာ…. နာ့ကိုလည်း…အရုပ်တစ်ရုပ်လောက်လုပ်ပေးပါလား…
အဟဲ..ဟိုဝက်ဝံရုပ်လေးကိုလေ အစက မီးပုံးလို့ မထင်ဘူး… စိမ်းလန်းစိုပြေက အရုပ်ကိုယ်ထဲကို မိတိုက်ဝင်ပြီး ရိုက်ထားတာလို့ ထင်တာ..ဟိဟိ..
အို လူပျိုကြီး အပျိုကြီးဒွေအတွက် လုပ်မပေးပါ……..
တော်ကြာ ယူမှမယူပဲ အဲအရုပ်ကြီးပဲ ဖက်အိပ်နေမှာဆိုးလို…….. ဟေဟေဟေ့
အယ် မိတိုက်က လူသာပုတာတော့ စိတ်ကတော့ ရှည်သား ..
ဟေ ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘာလားအေ………. အလွတ်ကြီး အရပ်ကို စော်ဒကားသွားဒယ်……
ဟီးး ဂျစ်လို့ စထှာ ချိတ်ချိုးပါနဲ့အေ… :hee:
စက်ရုပ်ပုံလေးဆို တော်တော်လက်ဝင်မယ်နော် ..
အဲဒါ အဲဒါ စိတ်ရှည် တယ်လို့ ကျောဒါ … :D
ကျုပ်ဆို အရပ်ရှည်သလောက် စိတ်မရှည်ဘူး
သူငယ်ချင်းကြီးရွှေတိုက်စိုး ဘာလုပ်နေလဲဆိုပြီးစုံစမ်းကြည့်တော့… မီးပုံးလုပ်နေတယ်တဲ့…
ကျုပ်ကအံ့သြလို့ မီးပုံးအစိမ်းကြီးလုပ်နေတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့ အရုပ်အစုံတဲ့…
အဲဒါနဲ့ ထပ်မေးမိတယ်… လူရုပ်လေးတွေလုပ်နေတာလားဆိုတော့…
မင်္ဂလာစရိတ်အတွက် မီးပုံးချိုးပြီး ငွေစုနေသော… ရွှေတိုက်စိုး….
အေးပေါ့ မီးပုံးချိုးငွေစုရတာပေါ့အေ…….. မွေးစားပါးပါးနဲ. မားမားက မင်ဂါစရိတ်ထုတ်မပေးတော့..
ကျွန်တော်ကို ဖက်တီးကပ်ပုံတူ အရုပ်လုပ်ဖို. ကိုဖက်လာအပ်တာ လက်တော့လက်ခံချင်ပါတယ်ဗျာ..
ဒါပေမယ့်…..အရုပ်လုပ်ပြီး နှစ်ပတ်လောက်က အိပ်လို.ပျော်မယ်မထင်ဘူးဂျ…….. ခိခိခိခိ
အောင်မယ်လေးဗျာ …အဲ့ဒီရုပ်ရီး ချိုးမယ့်အစား
ကွန်ဖူးပန်ဒါ သာချိုးပါဗျာ …အဲ့လာကမှ ချစ်စာ ကောင်းဦးမယ်
နဲ့ အနုပညာခံစားမှု့ ရှိမှလည်းလုပ်လို့ရတာ…
ကျေးဇူးပါ ဦးမိုက်ရေ.. စီပွားဖြစ်တော့ လုပ်တော့ပါဘူးဂျာ… ဒီမှာ မအားတဲ့ကြားထဲက ၀ါသနာတားမရလို. မနေနိုင်မထိုင်နိုင် လုပ်ပေးမိတာ… ပထမတော့ တစ်ရုပ်ပဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး နောက်မှ ထပ်လုပ်ပေး ထပ်လုပ်ပေးနဲ. အခုထိကို မပြီးနိုင်သေးဘူး…….ဟဟဟဟဟဟ
ဟယ်…… မိတိုက်က ဒါမိုးလဲ ဖစ်တာဘဲလား…..
အရုပ်ပုံတွေထဲ ညည်းကို မနည်းရှာယူရတယ်အေ….. :hee:
အန်တီမွန်ကစ်က မင်းမော်ဂွန်းကို မမြင်ဘူးဘူးလားဂျာ….. ခိခိခိ
ပုပုလေးနဲ.ချောတာဆိုလို. ရန်ကုန်မှာ သများပဲ ချိဒယ်…………….. အာဟိ
ဒီနှစ်တော့ သက်မဲ့ မီးပုံပျံအရုပ်ကလေးလုပ်တယ်
ဟဟ လေးပေါက်က တယ်လဲ အကွက်မြင်ပါလား…
အင်း သက်ရှိမီးပုံး ဆိုပါလား…….ဟဲဟဲဟဲ ကြိုးစားရမှာပေါ့ဗျာ……..
အမလေးဟဲ့ …. လန့်လိုက်တာ …….. မီးပုံးပျံလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ မင်္ဂလာများချောင်တွားပြီး ဗိုက်များကြီး သွားပီလားလို့ ……..
လူသာရှည်တာ မီးပုံးပျံလုပ်နိုင်တယ် … အားကျပါတယ်အေ …… တစ်ခြားလူတွေကူညီပေးသေးလား …. တစ်ယောက်တည်းလုပ်တာလား …… စက်ရုပ်က တူ့အရပ်ကို3နဲ့မြှောက်ထားတော့ အားရနေတာပေါ့လေ .. ဟုတ်ယား …….
Frame ချိုးတာတော့ တားတား တစ်ယောက်ထဲပါ အန်တီခိုင် အရောင်ကပ်တာကတော့ ကပ်ကူ နှစ်ယောက်ပါပါတယ်ဗျ…
အန်တီတမီးလေး အတွက် ရော လုပ်ပေးရမလားခင်ညာ….
အန်တီအတွက်ကတော့ သင်ဘောကြီး လုပ်ပေးမယ်………..ခိခိခိ
တော်လိုက်တာ.. လက်မှုပညာလည်း ရတယ်လား..
မီးပုံးချိုးတာ.. မမကြီး အတွက် အတိတ်နမိတ်ယူနေတာဖြစ်ရမယ်..
နာ လာ အားပေးမယ်နော်။
အောင်မာလေး တော်ကြာ မီးပုံးဓါတ်တွေကူးကုန်မှနော်
တက်သစ်စမင်းသားက အရုပ်ထပ်ပုနေပါသောကြောင့် အရပ်ရှည်အောင်ကြိုးစားရန် အကြံပြူပေးလိုက်သည်…
အဟင့် အဟင့် ဒီအရပ်ပဲ လာလာ ခလုတ်တိုက်နေကြဒယ်အေ……. အဟင့်အဟင့် ရပ်ကွက်လူကြီးနဲ.ကို တိုင်ကျောအုံးမယ်……..ဟွန်.
စက်ရုပ် အရုပ်ကြီးက လန်းတယ် …
အိုက်ဒါဂျီး လိုချင်ဒယ် ..
ဘုရင်ရုပ်တွေဂေါ လုပ်ဖူးလား …
လုပ်ရင် .. လဂါးပေးဘာ …
အလကားဒေါ့ပေးနိုင်ပေါင် လိုချင် အာဝါးပေးးးးးးးးးးးး ခစ်ခစ်ခစ်
ကိုင်း … ပေးဒေါ့ …
မပေးရင် ဖြတ်ပစ်မယ် .. ဒါဗျဲ …
အန် လုပ်ပါနဲ. ဦးလေးတုံး ရယ်… တား က ဒါလေးနဲ.လုပ်ချားနေရဒါပါအေ…..
ဦးလေးတုံး အတွက် ဆင်တွဲလား အရုပ်လေးလုပ်ပေးမယ် နော်နော်
အရုပ်တွေ အားလုံး တကယ်မိုက်တယ်ဗျာ..
တော်ပါပေတယ် အကိုကြီးရယ်…. စက်ရုပ်ကြီး ကို ကြိုက်မိပါတယ် . အဲ့စက်ရုပ်ကြီး ကို အသက်သွင်းနိင်ရင် ကောင်းမယ်နော်..
အိမ် က သားတော် မောင် ဆို ကြိုက် လိုက်မယ့် အမျိုး
တိုက်တိုက် က ဒီလို တွေ လည်း လုပ်တတ် တာပဲလား။ တို့ ရွာသား တွေ လည်း မခေ ဘူး နော်။
စိတ်ထင် ကထိန်ပွဲမှာ ရွှေတိုက် ၀င်ကမယ့် အရုပ်လို့ ထင်နေတာ။ :harr:
ခုမှ မီးပုံးပျံဦးကျော်ရင်ကို မီးပုံးချိုးပေးခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး (လူဝင်စား)ရဲ့ လက်ရာမှန်း သိရတော့တယ်။
အမငီး လူဝင်စားဆိုပါလား…. အဟီးးးးးးးးးးး
ပန်ဒါနဲ့တက်သစ်စ မော်ဒယ်မင်းသား ယှဉ်ရပ်နေတာ ပန်ဒါက ပိုမြင့်နေတယ်နော်
ဒါနဲ့မြင်းရုပ်လေးရော ချိုးတတ်လားဟင် ?
မကြည်ဆောင်းရေ အခုမြင်းရုပ်ထပ်လုပ်နေပါတယ်… ရရင် ထပ်ပြပေးမယ်နော်…
အန်တီအိသမီးလေးက တွန်းရတဲ့ မီးပုံးလေးတွေ လိုချင်တယ်ပြောနေတာ…
အရင်ကမှ ရောင်းတဲ့သူရှိသေး၊ခုကျ တရုတ်မီးပုံးတွေဘဲရောင်းကြတော့တာ..
မြန်မာမှု လက်ရာလေးတွေကို တတ်ကျွမ်းပြီး၊ထိန်းသိမ်းထားတာတွေ့ရလို့
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လဲ ငယ်ငယ်က အဲလို အရုပ်ဆိုင်တွေနားမှာ အမေက ၀ယ်ပေးတာ ကိုယ်လိုချင်တာမဟုတ်တော့ ထိုင်ပူဆာရင်း အဲနားက မထ အဲဒီလိုချင်တဲ့အရုပ်တွေကြည့်ရင်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားပြီး အိမ်မှာ ပြန်ုလုပ်ကြည့်တာ…
ဒါနဲ. အဲလိုအရုပ်လုပ်တဲ့ သူဒွေဆီ လိုက်ပို.ခိုင်းပြီး ကြည့်တာ… နဲနဲ အဆင်ပြေသွားတယ်… အချိုးအစားတော့ မကျဘူးပေါ့..
နောက်တော့ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အရုပ်ကို လုပ်လုပ်ကြည့်ရင်း အခုလို လက်ရည်တက်လာတာပါပဲဗျာ…. ဟီးဟီး
ဒါတောင် သိပ်မသပ်ရပ်သေးဘူးခင်ဗျ… တကယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေဆို သိပ်သပ်ရပ်တာ ကောက်ကြောင်းကအစ တိကျ လှပနေတာလေ……..
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာ.. နှစ်ကူးနီးလာပြီမို့.. အိမ်တွေ မီးထွန်းကြပြီ…
တချို့အိမ်တွေများ..မီးဆိုင်း..မီးဆွဲု.. အရုပ်မျိုးစုံ.. ပျံလန်နေအောင်လုပ်ကြတာ…
အဲဒါ.. ရပ်ကွက်လိုက်.. အိမ်တိုင်းညှိပြီး လုပ်ကြတာလည်းရှိတယ်..
ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်..အိဗ်ညမှာ.. ကားနဲ့လည်လည်သွားပြီး.. အိမ်တွေမီးထွန်းတာသွားကြည့်ကြတတ်ပါတယ်..
အဲဒီရပ်ကွက်တွေထဲ.. မီးတန်ဆာဆင်တာမှာ လှတဲ့ရပ်ကွက်ဆို.. တတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်အတာနဲ့.. ဆုပေးတာလည်း ရှိသတဲ့..
Los Angeles Christmas Lights Events, Shows & Things to do – LA.com
Find9Los Angeles Christmas Lights events and show tickets and more on …
Fri, Nov 30	‘Santa Clause Conquers the Martians’ – Fullerton
Sat, Dec 1	Nutcracker Christmas Tree Lighting & Holiday Village – Anaheim
Sat, Dec 8	Living History Afternoon – Dominguez Rancho Adobe Museum, Compton..
မြန်မာပြည်မှာ အဲလို ရောင်စုံမီးပုံး.. အရုပ်လေးတွေလုပ်ပြီး.. အိမ်အလိုက်… ဆုပေးပွဲလေးလုပ်ရင်.. ကောင်းမှာ..။
အနည်းဆုံးတော့.. တိုးရစ်တွေလာကြည့်ပြီး.. ဓါတ်ပုံရိုက်ကြမှာပေါ့..
ရပ်ကွက်ရဲ့.. စားသောက်ဆိုင်တွေ.. ၀င်ငွေတိုးမပေါ့…
ကိုရင်ရွှေထိုက်… ဒီလိုလက်တန်းလုပ်နိုင်တာ.. ပါရမီလို့ခေါ်ရမလားပဲ…
ပါရမီကနေ.. ပရိုတန်းဖြစ်နိုင်ပါစေသတည်း..။ :harr:
ကျွန်တော် စဉ်းစားထားတာတွေ ရှိပါတယ်.. မြန်မာ့ရိုးရာ အလှအပနဲ. ဓလေ့လေးတွေကို လုပ်ဖို.ပါ…
ဥပမာ… မန်းလေးဆို မြို.ရိုး… ရှမ်းဆို ငါးဖမ်းတဲ့ လှေနဲ. အရုပ်
အချိန်ကလဲ မပေးနိုင်တော့ အခုအခွင့်အရေးရတုန်းလေး လုပ်လိုက်တာပါ….
တိုက်တိုက် က ပါရမီ ပါပုံရပါတယ်။ တကယ်အားကျစရာပါ။ နောင်တချိန်ဒါနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပြီး အောင်မြင်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျမ ထင်ရင် လွဲခဲပါတယ်။ လွဲရင်လည်း မဟုတ်လို့သာ မှတ်ပါ။
မြန်မာ့ရိုးရာ အလှပလေးတွေကို လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးလည်း အလွန်ကောင်းပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ပဲရစ်မျှော်စင်လို လေဘာတီရုပ်တု လိုမျိုးတွေလည်း စမ်းပြီး လုပ်ကြည့်ပေါ့။
လက်ဆရှိပြီး စိတ်ရှည်တတ်ပုံရတယ်။ ဒိုးပတ်ဝိုင်းလို မျိူးဆိုရင်လည်း မြိုင်နေမှာပဲ။
အသက် ၃၉ နှစ် အရပ် လေးပေ ၅ လက်မ ။ နဖူးအနည်းငယ်ပြောင်ပြောင်။ မျက်လုံးပြုးပြူး ။ မူးရင် ကတတ်သည်။ မမူးရင် ပေါတတ်သော ။ သီချင်းဆိုတတ်သော။ လူကြီးပု တစ်ယောက် ပျောက်သွားပါသဖြင့် တွေ့ရှိသူများ ဆက်သွယ်ကြပါရန် ။
ဖုန်း ၀၉ ၅၀ R ၁၀၀ ။ မှတ်ချက် လက်ခံထား၇ှိသူအား ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။
မှားနေပါတယ် ကိုကိုဂ တားတားက အတက် က ၂၈ အရပ်က ၅ပေ၂ ခင်ဗျ (အလွယ်မှတ်ရင်တော့ အေဖိုးနှစ်ရွက် လီဂယ်တစ်ရွက် ဆိုဒ်ပါ)…….
မူးရင်ကတာ တားတားကို ညာခိုင်းတဲ့သူဒွေ ချိလို.ပါ… တားတားမက ချင်ပါဘူး.. အတင်း ချိန်းချောက်ကခိုင်းလို.ပါ..(အဲဒီ ဂကြီးအတွဲက အဆိုးဆုံးပဲ….. အရက်ဝိုင်းရှိလို.ကတော့ တားတားကို ကခိုင်းဖို. သီချင်းတောင်ရွေးလာကြတဲ့ ဟာဒွေ)…
အန်ကယ်ကြီးရေ တားတို.ဆီမှာတော့ အိမ်ရှေ.၀ရံတာမှာ မီးပုံအနီးလေးတွေ ထွန်းထားရင် အဲဒါ မာဆတ်ဗျ မာဆတ်…….. အဟီးးးးးးးးးးးးး
ဟို ရက် ကိုတိုက် မပေါ့မပါးကြီး နဲ့ သတင်းကြားလို့ လာကြည့်တာ
ပန်ဒါ မပေါ့မပါးကြီး လုပ်နေတာဖြစ်မယ်
ငယ်ငယ်ကတော့ ကြယ်တွေလုပ် မီးထွန်းခဲ့ဘူးတယ်
တခြားအရုပ် ချိုးဘို့က မလွယ်ဘူး
တီထွင်နိုင်တဲ့ အစွမ်း လဲ ရှိ စိတ်ကလဲ ရှည် အနုပညာ မျက်စေ့လဲ ရှိ
ကျွမ်းကျင်မှုလဲ ပါ အချိန်လဲ ပေးနိုင်မှ အရုပ်ကောင်း တစ်ရုပ် ရနိုင်မှာ
လေးစားပါတယ် ဗျာ ပညာလေး နဲနဲလောက် မျှဝေ ပေးပါဦး
ပြန်လာနိုင် မလာနိုင်တော့ မသေချာပါ
အစိမ်း…အများ ဆုံး ဆိုတဲ့ ဆုပေး ရင်…ဆုစာရင်းထဲ..ထည့် ရမှာသေချာနေတယ် နော်
ဖန်တီး ရှင်..မင်းသားချောကြီးလည်း…ချောမော လှပါ ၏
တိုက်တိုက်ပညာပျနေဘီဟေ့။ရှေ့ရှောက်ဒီထက်ပိုအသက်ဝင်တာတေမြင်ရတော့မယ် ခိခိ။ :harr:
ကိုယ့်လူက အာဂပဲ ( မနွယ်ပင်ရဲ့အမျိုးသားနဲ့ မဆိုင်ပါ )
မီးပုံးပျံ ပညာရှင် ရွှေတိုက်စိုး ၏ လက်ရာများဆိုပြီး